Biodiversity Vision - MG
Mazava ny fahitantsika ny maha-biodiversity azy:
⚫ hiantoka ny zavamananaina
miaraka amin'ny fepetra mivaingana ...
Tsy ampy ny mandray fepetra sasany toa ny fizarana ny renirano kely na ny tany manondro izay tsy dia misy fampiasana hafa. Ilaintsika ny manendry / mividy tany ahafahana manamboatra ny maitso maivana hatramin'ny haavo avo ka hatramin'ny avo indrindra, hatrany atsimo ka hatrany avaratra - e.g. fanamorana ny fifindra-javamaniry manoloana ny ady fandringanana amin'ny fiovan'ny toetr'andro - sns.
⚫ miorina amin'ny siansa
tsy politika ...
Izy io dia tokony ho fizaram-pandresena. Tany bebe kokoa nomena ho an'ny natiora mba hahasoa ny karazan'olona rehetra anisan'izany ny olombelona.
Fandresena vola mifototra amin'ny fitiavan-tena politika na ho an'ireo tetikasa efa mamatsy vola na tena tsy mitombina akory dia tsy tokony hitranga.
Efa mazava sahady fa ny ankamaroan'ny mpahay siansa dia mihevitra fa tsy dia ampy ny famonjena ny biodiversity. Na izany aza dia mety tsy nifanekena avokoa ny tena drafitry ny hetsika izy ireo. Mety mitombina ny mametraka ny loharanom-bola ho an'ny karazana tetikasa isan-karazany. Tetikasa iray tahaka izany dia ny fananganana farihy kely miaraka amin'ireo nosy mba hanomezana fiovana hiverina sy hiompiana ireo vorona.
Tsy fanontaniana ho hita manao zavatra nefa tena hamonjy ireny zavamaniry sy biby ireny.
⚫ ary ny fanoloran-tena
2% amin'ny GDP ...
Ny firenena sasany dia manana ny tanjony handany 2% amin'ny fidiram-bolan'ny Firenena (vokatra vokatra an-trano) amin'ny fiarovana. Ny fiarovana ny maha-zava-boajanahary ny planeta dia tsy latsa-danja. Izahay dia mitaky ny 2% -n'ny GDP ho fanatsarana sy fiarovana ny biodiversity.
Tsy afaka miandry izahay, ka ny drafitra dia tokony ho eo noho eo, fa tsy ny fampitomboana miadana ny fandaniana mandritra ny taona x.
Mba hanisana izany tanjona 2% izany dia mila tetikasa ekena fa tsy miankina amin'ny resaka politika, araka ny voalaza etsy ambony.
Azafady tsindrio ny zana-tsipìka kely ˅ ˄ etsy ambony havanana hanehoana na hanafina ny lahatsoratra fanampiny ⬆️
Zarao amin'ny olon-drehetra ny fifandraisanay www.biodiversity.vision